၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတော့ ထိုင်ဝမ်လေတပ်နှင့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အိပ်ကောင်းချင်းမအိပ်ရတဲ့ လ ဖြစ်လာခဲ့ပြီလား…. – New Of Burmese
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတော့ ထိုင်ဝမ်လေတပ်နှင့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အိပ်ကောင်းချင်းမအိပ်ရတဲ့ လ ဖြစ်လာခဲ့ပြီလား….
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတော့ ထိုင်ဝမ်လေတပ်နှင့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အိပ်ကောင်းချင်းမအိပ်ရတဲ့ လ ဖြစ်လာခဲ့ပြီလား….ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစိစစ်ခွဲခြားရေးဇုန်အတွင်းသို့ တရုတ်တိုက်လေယာဉ်များ၊ကင်းထောက်လေယာဉ်များနှင့် အီလက်ထရောနစ် စစ်ဆင်ရေးလေယာဉ်များ အလုံးအရင်းနှင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပျံသန်း မောင်းနှင်ခဲ့ကြသည့် တစ်နေ့တည်းမှာပင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တောင် တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းသို့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတိုက်ခိုက်ရေးအုပ်စုအား စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလကတော့ ထိုငျဝမျလတေပျနှငျ့ လကွေောငျးရနျ ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့တှေ အိပျကောငျးခငျြးမအိပျရတဲ့ လ ဖွဈလာခဲ့ပွီလား….ထိုငျဝမျနိုငျငံ လကွေောငျးရနျကာကှယျရေးစိစဈခှဲခွားရေးဇုနျအတှငျးသို့ တရုတျတိုကျလယောဉျမြား၊ကငျးထောကျလယောဉျမြားနှငျ့ အီလကျထရောနဈ စဈဆငျရေးလယောဉျမြား အလုံးအရငျးနှငျ့ ကြူးကြျောဝငျရောကျပြံသနျး မောငျးနှငျခဲ့ကွသညျ့ တဈနတေ့ညျးမှာပငျ အမရေိကနျနိုငျငံသညျ တောငျ တရုတျပငျလယျအတှငျးသို့ လယောဉျတငျသင်ျဘောတိုကျခိုကျရေးအုပျစုအား စလှေတျခဲ့ခွငျး။
Previous Article ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ထောက်ပံ့
Next Article ဆန်ထဲမှာ အာဆင်းနစ်အဆိပ်တွေ ပါလာခြင်း အကြောင်းအရင်းနှင့် ဘာဗီတာမင်မှ မပါတဲ့ မြန်မာဆန်